Banyere Anyị - Shandong Gangting Dianche Co.Ltd
Magic nri ụgbọ ala, nke bụ a elu-tech enterprise ọkachamara ke imewe, mmepe, mmepụta na ahịa nke azụmahịa ugbo ala.
The ụlọ ọrụ ndị na R & D na ọhụrụ dị ka ya isi ịsọ mpi, ma guzosie ike magburu onwe R & D na imewe otu, na-elekwasị anya na ọgụgụ isi, akpaaka, iche iche, na ukpụhọde.
Anyị na-esi ọnwụ na onwe ha ọhụrụ. The ụlọ ọrụ nwetara ihe karịrị 100 mba-larịị technology nchọpụta Kemịkalụ, na-enye ahaziri mobile shop ngwọta maka ahịa mkpa, ma na-enyere ndị ahịa na-ewu a ọhụrụ ahịa na nkà ihe ọmụma.
The ụlọ ọrụ bụ a ọkachamara emeputa nke ahaziri mobile na-echekwa. The ngwaahịa ekpuchi ọtụtụ ụdị ndị dị otú ahụ dị ka ngwa-ngwa-nri gwongworo, dị iche iche na ice ude adọkpụ iche iche na ụdị nke mmiri adọkpụ, azụmahịa outreach ugbo ala, studio ụgbọala, na ịma mma ntu ụgbọala.
Azụmahịa na-ekpuchi snacks, n'okporo ámá ọṅụṅụ, Ojiji, eletriki ngwa, home agbara, uwe ụlọ ọrụ, mma ntecha ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, njem na ndị ọzọ ọrụ. Anyị na ngwaahịa na-exported na United States, South Korea, na European Union, na Middle East na ndị ọzọ na Asian na mba Europe na mpaghara.